Mozilla, Fastly, Intel uye Red Hat Kusimudzira WebAssembly seUniversal Platform | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla, Fastly, Intel, uye Red Hat vakabatana kusvika kukudziridza matekinoroji anogadzira WebAssembly chikuva chepasirese kumhanya kodhi zvakachengeteka pane chero zvivakwa, inoshanda sisitimu uye mudziyo. Zvekuvandudzwa kwekubatana kwenguva yekumhanya uye macomputer, iyo inobvumidza kushandiswa kweWebAssembly kwete chete mumabhurawuza ewebhu, nharaunda yeBytecode Alliance yakaumbwa.
Kugadzira zvirongwa zvinotakurika yakaunzwa muWebhuAssembly fomati iyo inogona kumhanyisa kunze kwebrowser, zvinokurudzirwa kushandisa iyo WASI API (WebAssembly system interface), iyo inopa mapindiro epakati ekubatana kwakananga neiyo inoshanda system (POSIX API yekushanda nemafaira, zvigadziko, nezvimwewo).
Chinhu chakasarudzika yemuenzaniso wekuuraya wezvishandiso zvinoshandisa WASNdiri kuvhura mune sandbox nharaunda kuzviparadzanisa nehurongwa hukuru uye mashandisirwo ezvokuchengetedza zvichibva pane manejimendi manejimendi, yezviito neimwe yega zviwanikwa (mafaera, madhairekitori, zvigadziko, mafoni ekufona, nezvimwewo) iko kunyorera kunofanirwa kuve nemvumo inoenderana kuzivisa mashandiro).
Uno yezvinangwa zvemubatanidzwa zvakasikwa kugadzirisa dambudziko rekupararira kwema modular application nekuwanda kwekutsamira. Mukushandisa kwakadai, kutsamira kwega kwega kunogona kuve chinhu chinokonzeresa kukuvadzwa kana kurwiswa. Kuwana Kudzora Kudzora kunokutendera iwe kuti uwane kutonga pamusoro pese kunyorera kwakabatana nako.
Nhengo dzeBytecode Alliance dzinofunga kugadzirira mhinduro yakakwana yekuchengetedzwa kwakachengeteka kweWebAsAssage mafomu ayo anotanga kusavimbika.
Kudzivirirwa, zvinokurudzirwa kushandisa iyo pfungwa yeanoprocesss, umo module yega yega yekutsamira yakaparadzaniswa mune yakasarudzika yakasarudzika WebAssembly module, uyo ane masimba akagadzirirwa kusunga chete module iyi (semuenzaniso, raibhurari yekugadzirisa tambo haigone kuvhura network socket kana faira).
Kusiyana nekuparadzaniswa kwemaitiro, WebAssembly vanobata vakareruka uye havade chero zviwanikwa zvekuwedzera Uye zvakare, kudyidzana pakati pevabati hakunonoke zvakanyanya pane kudaidza zvakajairika mabasa.
Zvekuvandudza pamwe, mapurojekiti akati wandei ane chekuita neWebhu.
Nguva yemasikati: a nguva yekumhanya yekumhanyisa WebAssembly kunyorera neWASI yekuwedzera seyakajairwa yakamira yega maapplication. Iyo inotsigira kuvhura WebAssembly bytecode ichishandisa yakakosha yekuraira-mutsara zvinoshandiswa uye nekugadzira kunze-kwe-kwebhokisi mafaera anogona (wasmtime yakavakirwa mukushandisa se raibhurari).
Lucet: Ndicho compiler uye nguva yekumhanya yekumhanyisa mapurogiramu muWebAs Assembly fomati. Chinhu chakasarudzika cheLucet kushandiswa kweiyo yakazara yekudzivirira kusangana (AOT, kumberi) pane muchina kodhi yakakodzera kuitisa yakananga kuuraya panzvimbo peJIT. Iyo purojekiti yakagadziriswa neKukasira uye yakagadzirirwa kushandisa zvishoma zviwanikwa uye nekukurumidza kuvhura zviitiko zvitsva.Sechikamu cheprojekti yekubatana, zvakarongwa kushandura Lucet compiler kuti ishandise Wasmtime sehwaro.
WAMR (WebAssembly Micro Runtime): es imwe nguva yekumhanya yekumhanyisa WebAssembly, yakatanga kugadzirwa neIntel kuti ishandiswe muIoT zvishandiso. WAMR inogadzirirwa kushomeka sosi yekushandisa uye inogona kushandiswa pamidziyo ine hushoma RAM. Iyo projekiti inosanganisira muturikiri uye chaiwo muchina kumhanya WebAssembly bytecode, API (subset yeLibc), uye maturusi ekugadzirisa zvine simba kunyorera.
Cranelift: es kodhi jenareta inoshandura inomiririra ye-Hardware-yakazvimirira yepakati muchina kodhi yemuchina inogadziriswa yakagadzirirwa mamwe mapuratifomu ehurdware. Cranelift inotsigira basa kuumbiridza kuenzanisira kune inokurumidza kuburitsa chizvarwa, ichikubvumidza iwe kuti uishandise kugadzira JIT compilers (Cranelift-based JIT inoshandiswa muWashmight chaiyo muchina).
WASI: una yakamira yekumisikidzwa kweiyo WASI API (Web Assembly Sisitimu Inopindirana) kuronga kudyidzana neiyo inoshanda sisitimu.
cargo-wasi: un module yemutoro wepakeji iyo inoshandisa rairo yekuumba Rust kodhi muWebhu Assembly bytecode uchishandisa WASI interface kushandisa WebAssembly kunze kwebrowser.
wat uye wasmparser: mwanakomana vanyori vekuongorora zvinyorwa (WAT, WAST) uye zvinomiririra zvebhinari zveWebhu reKoseti byte kodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla, Fastly, Intel uye Red Hat inokurudzira WebAssembly sepuratifomu yepasirese
"Kusiyana nekuparadzaniswa kwemaitiro, vabati veWebAssembly vakareruka uye havadi zvimwe zviwanikwa" ...
NaMozilla neRed Hat mumusanganiswa, iko kucherechedzwa kwe "mwenje uye kunoda kusatombova nezvimwe zviwanikwa" ichave inoshamisa joke xD